Naveed Khan: Akụkọ banyere Pakistani na Dubai | Ọrụ - Nlekọta - Njem UAE!
Naveed Khan: Akụkọ nke Pakistani na Dubai
Nwere ike 19, 2019
Ntuziaka maka ndị na-achọ Job
Nwere ike 21, 2019
Naveed Khan: Akụkọ nke Pakistani na Dubai - Nke a bụ iji jide ndụ na aka abụọ!
[ARForms_popup shortcode_type = 'popup' id = 101 gbadata = 'Mee Ebe a!' ụdị = 'ofufe' ọnọdụ = 'aka ekpe' elu = 'auto' obosara = '800' n'akuku = '90' bgcolor = '# ff6529' txtcolor = '# ffffff']
Naveed Khan - Na Na Na!
Naveed Khan 26th Eprel 2008, ikekwe ubochi nke ndi okacha amara noo na Pakistan na UAE, mana ọ gbanwere m ndụ. Ọ bụ ụbọchị mgbe m fegara UAE ịchọ ọdịnihu ka mma.
Enwere m ọtụtụ Nrọ na ochicho banyere mkpebi m. Enwere m olile anya ma kwere m nkwa nke ukwuu na-atụle akụkọ ga-aga nke ọma nke ndị mmadụ na-arụ ọrụ ebe ahụ, olileanya niile na nkwa dị ka ọ bụ eziokwu.
Ọ bụ njem ụgbọ elu mbụ m ma ọ bụghị njem obodo Anọ m na-aga obodo ọzọ ya na omenala, omenala na asusu di iche. Ọ bụ ahụ efe ahụ okpukpe bụ otu.
Naanị ịmalite ịchụ nta ọrụ na Dubai
Otu ihe a na-enye m obi ike na ume na-eche nsogbu ndị na-abịanụ na-achụ nta. Esi m na Lahore pụọ n'abalị wee rute na etiti abalị na Dubai. Airportgbọ elu ụgbọ elu Dubai bụ mmekọrịta mụ na 1st na akụ na ụba ngwa-ngwa. Ọ bụ sị, ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịghọta echiche nleta ụdị obibi obodo ọ bụla ọdụ ụgbọ njem ha, ọdụ ụgbọ elu Dubai nyere m ohere a.
Ọ dị egwu ịhụ ọtụtụ ndị mmadụ na asụsụ dị iche iche a na-ahụ n’otu ụlọ. Nke a bụụrụ m nrọ ịhụ ka ndị sitere n'agbụrụ, asụsụ na okpukperechi na-ebi n'udo.
Emechara m chọpụta na nke a ga - ekwe omume ma ọ bụrụ na ha niile ha nha anya n’iwu. N'agbanyeghị onye na ihe ị bụ ma ọ bụrụ na imebi iwu mgbe ahụ ị nweghị ike ịgbanarị ya. Ndị bi ebe ahụ nwere ike ịdị iche na m, mana ọ bụrụgodi na ha ziri ezi mmadụ ole ga na-enweta ọgwụgwọ pụrụ iche ma eleghị anya na 5% ka 10% nke Onu ogugu ndi UAE, ọbụlagodi na ha ga-aza ajụjụ n'ihu iwu, mana izu ike nke bi n'ime obodo na ịmepụta ọha mmadụ bụ ihe doro anya n'okpuru iwu.
Agbanyeghị laghachi Airport, Ezigbo ihe diri m ndị ọrụ ọpụpụ Nke a bụụrụ m ikuku obi ụtọ. Ndị ọrụ ọdịnala mechara mesịa nwee nsọpụrụ. Ndị ọrụ dị otú a bụ ihu nke mba ọ bụla n'ihi na ha nọ n'ahịrị n'ihu na ọnụ ụzọ obodo n'ihi na ndị si mba ọzọ na-abịaM hụrụ ụfọdụ ikpe ndị mmadụ na-eke nsogbu ma na ndị ọrụ na-anwa ịkọwa ha nwayọ.
Na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọelu Dubai
Ihe m ghotara ọ bụrụ na gị na ndị ọrụ ọdụ ụgbọ elu na-emekọrịta ihe n'eziokwu Ha ga-emeso gị ihe n'echeghị echiche, ị gaghịkwa atụ egwu ma ọ bụrụ na i meghị ihe ọjọọ, a ga - egosipụta nkwupụta nke m nke ọma na nke ikpeazụ nke edemede m. Atsnye ndị ọrụ ọdụ ụgbọ elu ahụ ọrụ ha na-agbasi mbọ ike na-arụ ọrụ ha na njikwa ha ndị dị otú ahụ buru ibu ọtụtụ ndị si omenala dị iche iche na-enweghị ịkpaghasị ọrụ ahụ. Dịka ọdụ ụgbọ elu Dubai bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ elu ụwa nke kachasị arụ ọrụ nke ọma ka ọ bụ nsonazụ ndị mbọ niile na-agba. Mgbe ụfọdụ Ha nyeere gị aka karịa ndị nke gị.
Gburugburu ebe a na-anya ọdụ ụgbọ elu wee dị mma nke na o meghị ka m nwee mmetụta ọnọdụ ihu igwe dị n'èzí, nke na-agbakarị na UAE n'ụbọchị ndị ahụ. Otu onye n’ime ndị ezi-na-ụlọ m nọrọ chere m. N'agbanyeghị na ọ bụ etiti abalị, ahụghị m ihe ọ bụla ma ọlị. O kwesiri ime njem gaa 139 Km site na Abu Dhabi ka m si na Dubai were m.
Site Abu Dhabi ka Dubai
Ndị mmadụ maara nke ọma ọ bụghị naanị n’ebe dị anya kamakwa okporo ụzọ. Okporo ụzọ Abu Dhabi convenient bara uru karịa njem karịa Dubai, n'ihi ndụ ya na-abụghị mkpọkọta na azụmahịa. Nwa okorobịa ahụ ji ọ greetedụ kelee m, onye ezinụlọ ya ebirila ebe ahụ ọtụtụ afọ. Emechara m chọpụta na ihe o mere bụ n’ihi mmetụta nke ọdịbendị UAE maka imeso ndi obia nke o webatara akparamagwa ya. Abalị ahụ dị ọkụ n'ihi ụbọchị ọkụ.
Anyị na-awagharị n'okporo ụzọ nke Dubai tupu ịpụ maka Abu Dhabi. Na-awagharị n'ihi na ọ chọrọ iri nri dị ka onye ọbịa na-emesapụ aka ọ maara nke ọma na m nwere si mba ọzọ mee njem ma agụụ ga-agụrịrị usoro mgbe mbugharị, mbata na ọpụpụ na mkpuchi.
Anyị kwụsịrị n'akụkụ nri ma ghara icheta ihe anyị riri ebe ahụ, mana ihe m chetara bụ na ọ tọrọ ụtọ. Na ụzọ azụ onye nnabata m rụrụ ọrụ ntụzịaka ndị njem, ọ na-agwa ndị mmadụ akara ndị anyị si n’aka ha gafere. Nnukwu ụlọ, nnukwu ụlọ, nnukwu ụlọ elu na ụlọ elu ebe ahụ juru eju ịkọ banyere Dubai na ọbụna ogologo njem ahụ dị anya kpuchie n'enweghị ike ọgwụgwụ.
Enweghị ihe ọ bụla dị ka igwu egwu na mmiri.
O were nganga na-agwa m banyere Burj Khalifa (Burj Dubai) nke nọ na ngwụcha ikpeazụ ya ma ọ bụ na-agwụ. Ugbu a amatala m mgbe m na-ede ihe a, ọ gaara ewe obere okporo ụzọ gaa Abu Dhabi, kama nke ahụ, o butere iji gosi m nnukwu ebube na ịma-mma nke obodo ahụ. N’ebe niile ọ na-eto Sheikh Zayd onye ọ na-akpọ ya Baba Zayd (A na-akpọkarị ya Pakistanis). Dị ka a ga-asị na ị na-asọpụrụ nke a nnukwu onye ndu bụ akụkụ nke mkparịta ụka ha.
Mgbe anyị hapụrụ Dubai na mgbe anyị jikọtara ọnụ Ụzọ Shiekh Zayd eduga na Abu Dhabi, echetaghị m mana, ọ dị ịtụnanya ịhụ sistemụ okporo ụzọ na nnukwu ugbo ala ndị ahụ na-eji nwayọ ma hazie nke ahụ ịnya ụgbọ ala dị mfe na isi okporo ụzọ ma ọ bụrụhaala na ị na-erube isi na iwu okporo ụzọ. Onye ọbịa m na onye na-eduzi m gwara m na ịnweta akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala bụ ihe siri ike ịnweta. Ya onwe ya nwetara ya na ngbali nke ato. Nke a na-egosi etu esi emebe iwu na steeti.
Nke a na-egosikwa na steeti na-eche maka nchekwa nke ndị mmadụ na erughi eru nwere ike ịnọ n'oche ịnya ụgbọ ala ma ụgbọala ya ma ọ bụ ahịa steeti. M gosipụtara mmasị m, ajụrụ m ya ọtụtụ ajụjụDịka ọmụmaatụ, ahụrụ m àkwà na ogidi ma m jụọ ajụjụ banyere ya, ọ gwara m na ọ dị n'okpuru ụzọ ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ oloko na-efe ọsọ ga-agba ọsọ na nke a n’oge na-adịghị anya site na Dera Dubai rue Jebel Ali.
Ihe ndị megaprojects UAE
Ọ tụrụ m n'anya nke ukwuu ịhụ otú n'otu oge steeti na-arụ ọrụ na mega oru. Ala ala, ihe mgbochi, ebe ntụrụndụ ị kpọrọ ya ma ị ga-ahụ ihe owuwu ahụ. Na ọpụpụ site na Dubai, onye ọbịa m gosipụtara m uzo nke na-aga Palm Jumeirah, enweghịkwa m ohere ileta ya. O kwuru ya ebe dị oke ọnụ. Ebe anyị hụtara ọtụtụ ihe eji arụ ọrụ ọha na eze, anyị na-ahụ ụfọdụ kwesịrị ịkpata ego. Ọ dị mma ịkọwapụta mana mana iji otu esi eji ya ndị ndu UAE nwere ọhụụ mara mma gbasara nke a. Ha maara otu esi enweta ego site na ndị isi ma na-emefu ya na ọha na eze dị ka Robin Hood mana nke a abụghị iwu J, n'ezie, onye ọrụ gọọmentị.
Ebe E Si Nweta: https://www.thenational.ae/uae/uae-megaprojects-2019-new-developments-in-abu-dhabi-and-dubai-1.841398
Iwu na ụkpụrụ na Dubai
Ewezuga ihe owuwu ahụ, odida obodo dịkwa iche, n'abalị ahụ ịgbachi nkịtị na ọzara na-atọ m ụtọ mgbe niile, ị bịarukwuoro onye kere gị nso n’ebe ndị a ma njem a nyere m ohere. Akingkwụsị ụgbọ ala dị obere n'ihi na enwere iwu siri ike gbasara ahụike nke ụgbọ ala ma ọ bụrụ n'ụgbọ ala ọ bụla anaghị agabiga ule mmega ahụ kwa afọ agaghị ahụ n'okporo ụzọ, iwu ndị dị otú a bara uru maka ọha na eze mgbe niile izere ihe ọghọm njem ọ bụla. Mgbe m nọ ebe ahụ, anụrụ m iwu gbasara ndị na-agba ụkwụ ga-emeju n'oge na-adịghị anya. A ga-enweta J Walkers n'oge na-adịghị anya. Ọzọkwa iwu ọzọ maka nchekwa ọha. Ndị mmadụ mara na ozugbo emere iwu a ọ ga-agbasochi anya.
Egwu a bu iwu nkwa nke udo na ezigbo usoro nke azụmahịa steeti. Agaghị eme ka ahụmịhe nkeonwe m na otu blọọgụ nwere ọtụtụ ịde ederede ọ ga-ede ya na blọọgụ ndị na-abịa abịa. Nke a abụghị naanị blog kama ọhụụ mmụta na ahụmịhe m, nke m ga-ekerịta oge na oge. Ndị bi ebe ahụ nwere ike ha agaghị echebara ya echiche mana mbọ ya iji nyere ndị mmadụ aka ịghọta UAE, ọtụtụ ihe agbanweela na agbanweela mana isi ahụ ga-adịgide. Buildlọ nwere ike wube ma mebi emebi mana ndị na-ewu ụlọ ahụ na-anọ ebe ahụ, ndị na-ewu ụlọ bụ ndị isi na ndị obodo …….
Lee dum UAE Abu Dhabi, Dubai, Sharjah
Mgbe ogologo njem gasịrị, erutere m ebe m na-aga Maroor Road Abu Dhabi. Ejiri m izu mbụ m wee kirie gburugburu, ndị mmadụ na gburugburu ya. Ahụmahụ kachasị mara mma bụ Masaajid nke mpaghara ahụ nke m mechara hụ na UAE Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Al Ain na Ras Al Khaima nwere otu ọmarịcha ụlọ nsọ ahụ. Ihe kacha mma na niilejidjid Adhan na-agụ n'otu oge. Olu oma moazins kwusara n’ehihie, ehihie, mgbe ehihie, na anyasi na abali. Arabic dị ka asụsụ ala ha azan yiri ụda olu kachasị dị egwu na ụwa.
Ezigbo ihe Masaajid na-agba site n'aka gọọmentị yabụ ikwusa ozi maka otu ọ bụla ma ọ bụ atụmatụ onwe ya agaghị ekwe omume. Imam onye masjid ebe m bi bụ onye Iraq, o nwere obi oma ma dịkwa obi ala. Ọ bụ ezie na amabughị m nke Arabic mana ọ gbara m nkuzi banyere ụfọdụ okwu Alakụba na O juru m anya na amaghị asụsụ Arabik. Aghọtara m okwu niile ọ na-agwa m. Echere m na ọ bụ Islamicmụnna Islam nke mere ka anyị na-agwa ndị mmadụ okwu n'obi.
Ihe owuwu nke Masajid mara nma nke ukwuu nke mere na akpọrọ ya ụlọ nke Pụrụ Ime Ihe Niile. Ahụrụ m ụmụaka si agbata obi anyị wetara akpa ụlọ akwụkwọ ha ma rụọ ọrụ ụlọ ha na Masjid. Ọ bụ ihe na-enye ume ọhụrụ na Masajid na-arụ ọrụ dị n'etiti obodo abụghị naanị n'oge ekpere. Omenala a kwesịrị ịgbaso mba niile ndị Alakụba. Ndị ọbịa m gwara m na ọnwa nke Ramadan bụ ọnwa mara mma na UAE nke ndị mmadụ na-awụpụ ịhụnanya na mmetụta na mmesapụ aka ha, ụbọchị niile nke Ramadan bụ ememe. Apụrụ m iche nke ahụ ihe ọ na-ekwu abụghị naanị eziokwu.
Mpaghara dị na Dubai
Ugbu a ka ahịa, dị ka ihe niile atụmatụ owuwu ahịa e wuru na atụmatụ icho mkpa niile nke obodo bi nso. Ndi na asa ivu, ebe a na-aju ulo, ebe a na ere ozu na ndi egwuregwu vidio. All obere ụlọ ahịa na-agba ndị Asia obodo akpan Pakistan, Ndị India na Bangladesh. Ogo nke ihe oriri di mma.
Ihe kacha nye m obi ụtọ bụ mpaghara egwuregwu, ahụrụ m ụmụ ntorobịa Arab na-egwu egwuregwu na-agbapụ ibe n'etiti network site na. Egwuregwu ahụ wutere m ezigbo iwe ma ihe kpaliri m bụ itinye aka na egwuregwu. Mgbe ha na-eti mkpu na Arabic Nke a mere m ihe ọchị. Shoplọ ahịa egwuregwu na-ama jijiji n'ụzọ nkịtị site na mkpu ha, M na-agakarị ha ịnụ ụtọ ya.
Achọpụtala m otu ihe
Otu ihe m chọpụtara na enwere ike imebi akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi dị mma site n'ọdịdị mana site na uto adighi ya nma. Ihe kpatara ya nwere ike ịbụ na ndị ahụ enweghị ebe mgbago ala ahụ dị. UAE bu ebe ahia ahia obula di Yabụ na nnweta nke ihe ọ bụla emepụtara, mepụta ma ọ bụ zụlite gburugburu ụwa nwere ike ịchọta ebe a na ịnwe ihe eji eme achịcha gburugburu ebe a adịghị mfe. N'ihi ya, ọ nwere ka echekwaa nri dị n’ahịa. Mana ogo nke ihe ọ softụ softụ dị nro, ihe ọ juụ juụ, ihe mmiri ara ehi karịrị nke kachasị elu.
Mmanụ oliv, Khubuz, Houmous dị ka nri nkịtị n'ụlọ ọ bụla, ọ bụ nri na-edozi ahụ dakọtara na mbara ọzara nke UAE. Ọgbọ ọhụụ na-achọkarị nri ngwa ngwa Burgers na Shawarmas. N’oge ahụ, azụrụ m nri nri McDonald zuru ezu maka AED 12. O ruru eru izu. Maka m, ọ bụrụ na anyị na-aga maka nri dị mfe AED 20 ezuru maka ụgwọ mmadụ na-emebu na nri ụbọchị.
Ihe m chetara ugbu a na khubuz bụ nke filis 75 na mmanya dị nro nwere ike ịbụ nke AED 1 na Abu Dhabi. N'ihi na kwuru na Dubai biko tinye XIIX jujuru n’ihe abuo a mgbe m zụtara ya na Dubai. Zohrat tul Lebanon bụ ihe na-enye obi ụtọ site na ndị ọbịa, nri dị iche iche bụ ụtọ dị ụtọ bụ osisi. O karịrị mmadụ niile ma ejiri ya rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụ otu n'ime ebe oriri na-adịghị amasị Abu Dhabi. A gwara m na o nwere ụlọ oriri na ọ .ụ itsụ ya nile UAE.
Ụlọ ahịa Dubai na Ụlọ Ahịa nke Emirates
A na-edebe allslọ Ahịa ahụ otu n'ime ihe nkiri kachasị mma nke UAE. Ọbụlagodi na ịchọghị ịzụta ihe ọ bụla, ọ ka nwere ihe maka gị. Enwere cinemas na nnukwu ụlọ ahịa na-enwe ọmarịcha gburugburu ebe obibi. Yabụ ị ga - ekpori ndụ ma nọrọ ebe ahụ. Ozugbo m gara leta ụlọ ọrụ ụgbọ elu na Dubai, erutekwara m n’ọfịs n’ehihie ma dị ka ọtụtụ n’ọfịs azụmahịa, e mechiri ya n’oge ahụ ma ga-emeghe n’ehihie, aghaghị m ichere ruo awa 3. Anọ m na-eche ihe m ga-eme M banyere Marina Nnukwu alllọ Ahịa ma amaghị m ebe oge na-aga, Ọ dị ka ntamu anya. Emeghị m ihe ọ bụla guzoro ma na-ele mkpọtụ gburugburu. N'ebe ahụ ka m ghọtara Dubai bụ ihe a na-enweghị ike ịkọkọta ọnụ n'okwu ọ bụla.
Ọnọdụ ihu igwe ụbọchị ahụ Eprel Abu Dhabi nwere ike ịpụ apụ na mpụga, ụbọchị dị ọkụ ma n'ụsọ mgbede ikuku na-ajụ oyi ikuku. Maka ihu igwe mpaghara (Muwaatin) abụghị ihe dị mma ma ọlị n'ihi ahapụla ụlọ ha ruo mgbe ìhè anyanwụ si n'okporo ụzọ dị.
Uche nke nchekwa na nnwere onwe dị ọtụtụ n'obodo na m malitere ịgagharị naanị m naanị n’ime ụbọchị 2 n’atụghị ụjọ. O yiri ka ọ bụ obodo m. Comingnabata mmadụ ọhụrụ bụ akụkụ nke ọdịnala ha.
Ụgbọ njem na UAE
Ọrụ ụgbọ njem dị mma na UAE, Tagzi, vans buss mode ọ bụla ruru akara nke ịdịrị ndị njem mfe, Taxis bụ ihe dịtụ ọnụ mana ma ọ bụrụ na ọ bụ taxi nweziri ya, ọ bụ ndị bịara ịba ama na taksị nwere ụlọ ọrụ ọ bụla, ụgbọ ala ndị ahụ buru ibu nke ọma yana oche kachasị mma na ikuku zuru oke nke a chọkwara ihu igwe dị oke egwu. Vans dị maka njem dị anya nke dịkwa mfe. N'ihi iwu siri ike nke okporo ụzọ, ọ bụ ihe na - adịkarịghị anya na onye njem ọ bụla mere mkpesa banyere ụgbọ ala ma ọ bụ ndị ọrụ ụgbọ.
N'ime izu abụọ nke ọrụ m dị elu, Ekpebiri m ime UAE ụlọ m nke abụọ. N'ihe na-esonụ, m ga-ede banyere ya ichu ichu m na acho oru.
Jikọọ na: Naveed Khan na Linkedin
Eduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka nke anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Ya mere, na nke a n'uche, ị nwere ike inweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.